Sukudlala neNdoda yeRepo
Udibana njani nendoda yerepo? Ukulahlwa kwemoto 101: Ukuphepha njani kwaye ujongane neNdoda yeRepo Gcina imoto yakho kwigaraji yakho. Gcina ityala elihle. Thethathethwana
Impendulo eKhawulezayo: Andazi apho iCloned Git Repo isanda kugcinwa khona
Ingaba oovimba bam abakhandiweyo bayaphi? Ngokungagqibekanga, umyalelo we-clone ugcina ikhowudi yakho kwifolda eyabelana ngegama lendawo yakho yokugcina. Oku kungabhalwa ngaphezulu ngokukhankanya
Umbuzo: Musa iiNkonzo zeJaguar kunye noLungiso
Ungabi Namalungelo eRepo Emva Kokongeza iSitshixo seSsh
Umbuzo: SukuLungisa iKhetho lomdlalo weSims 4
Kutheni ndingakwazi ukulungisa umdlalo wam we-Sims 4? Re: Sims 4 Ayizukulungisa Kuya kufuneka uyeke iMvelaphi kwaye uqale ngokutsha ukuze i-beta ivulwe. Ukuba usenayo
Awunakho ukufikelela kwi-Clone Git Repo
Ngaba imvume yogcino lwe-git ingakhatywa? Xa usenza izitshixo ze-SSH ngaphandle kwe-sudo kwaye emva koko usebenzisa i-sudo ukufanisa indawo yokugcina, awuyi kusebenzisa izitshixo ezifanayo ozenzileyo.
Sukuziva ugcwele emva kokulungiswa kwe-Inguinal Hernia
Ukulungiswa kwe-hernia inguinal ayifuni naziphi na izithintelo zokutya ezikhethekileyo emva kotyando. Ezinye izigulana zinokufumanisa ukuba umdla wazo awukho mgangathweni kangangeveki okanye ezimbini emva kotyando.
Impendulo eKhawulezayo: Musa ukuziva ugcwele unyaka emva kokulungiswa kwe-Inguinal Hernia
Kuthatha ixesha elingakanani ukuchacha ngokupheleleyo kuqhaqho lwe-inguinal hernia? Uninzi lwabantu abavule utyando lokulungisa i-hernia bayakwazi ukuya ekhaya kwangolo suku. Ixesha lokubuyisela
Umbuzo: Sukuzoyika iingoma eziphindaphindiweyo
Ngaba ngokwenene kukho intsimbi yenkomo ekungoyikini umvuni? Ngelixa ingoma ethi “(Musa ukoyika) uMvuni” nguBlue Öyster Cult eneneni idlala intsimbi yenkomo kuyo yonke ingoma,
Musa ukuGwaba iDrain Repair
Ngaba abatywini kufuneka bombe imisele? Abatywini baya kucebisa kuphela ukugrumba njengendawo yokugqibela. Kuthetha ukuba ukulungiswa akunakulungiswa nge-lining kwaye nokuba
egqithileyo 1 2 3 ... 81,053 Okulandelayo